Iyo Apple Watch Series 4 ndeyepamutemo uye ine 40 uye 44 mm | Ndinobva mac
Zvinotaridza kuti makuhwa anga achizadza panguva ino uye wachi yakapihwa kwatiri sezvatakazviona mune zvakaburitswa zvakatorwa. Nguva yacho pachayo iyo yakati kurei inosvika 40 uye 44mm saka iwo akati kurei, 2mm zvichienzaniswa neshanduro dzakapfuura.
Mawadhi ane zvedongo zasi kuti ubate zvirinani kupora uye zviri pachena kumwe kuvandudza kuri processor yewadhi ine makumi matanhatu nemasere uye iri kusvika nekukurumidza zvakapetwa kaviri pane yapfuura Apple Yekuteedzana 3.
Ichokwadi ndechekuti basa rakaitwa pachiratidziri rinoonekwa uye nderekuti iwe unogona kuona rwakawanda ruzivo uye ivo vane imwe yakatenderera dhizaini kuti iratidzike zvirinani aesthetically. Ichokwadi kuti newatchface yavakatiratidza mune yakakosha zvinotaridzika zvakanaka pane iyo nyowani skrini.
Uye zvakare, korona, mutauri akagadziridzwa uye imwe sensor inoratidzwa pazasi peawa iyo ichave iri yekuyera kuyerwa kwedu. Iyo wachi ichaenderera ichinyevera muzviitiko zvecoronary arrhythmia uye ichokwadi kuti musana wakagadzirwa neceramic. ECG yakananga kubva kukorona yeApple Watch Series 4, zvinoreva kuti nekuisa munwe pairi wachi ichakwanisa ita electrocardiogram iyo yatinogona kuchengeta nekuendesa kwachiremba. Zvinotaridza kuti kusimudzira kwechigadzirwa kwakanyanya uye isu ticharamba tichiona nhau munguva pfupi yapfuura panoperera chirevo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch Series 4 ndeyepamutemo uye ine 40 uye 44 mm